Thunder Pa Yit'sphoto.
ဒေါ်စုက ဟိုကိစ္စ ဒီကိစ္စတွေကို..လက်မခံလည်း.. သူတို့က...လက်ခံတယ်ဆိုပြီး ၀ါဒဖြန့်မယ်.. တကယ်လက်ခံတာ လက်မခံတာအရေးမကြီးဘူး.. လူတွေရဲ့ အမြင်မှာ အဲဒီအမြင်မျိုးတွေ.. များများဝင်သွားဖို့ကသူတို့အလုပ်.။ --------------------------- ဒေါ်စုက ဟိုစကားဒီစကားတွေကို မပြောပေမဲ့.. ပြောတယ်လို့ အတင်းမျက်စိမှိတ်အော်ကြတယ်.. ဒေါ်စုတကယ်ပြောတာမပြောတာအရေးမကြီးဘူး.. လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ..ဒေါ်စုကဒီလိုတောင်ပြောရက်တယ်..ဆိုတဲ့ သံသယစိတ်တွေ ကြီးထွားသွားစေဖို့...၊ ----------------------------- အတိုက်အခံတွေ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ.ကိုလည်း.. အလကားနေစွတ်စွဲပုတ်ခတ်ကြတယ်.. ပြန်သုံးသပ်ရရင်.. သူတို့စိတ်ထဲမှာ.. အောက်တန်းကျကျ ပုတ်ခတ်ဖို့.. အဆင့်အတန်းမရှိ အတင်းပြောဖို့... အောက်ကလိအာဖို့...၊ သိက္ခာရှိတဲ့သူတွေကို ..သိက္ခာချဖို့.. အဆင့်အတန်းနဲ့နေတဲ့သူတွေကို.. ဂုဏ်မရှိစေဖို့.. ပညာရဲရင့်တဲ့သူတွေကို ..အရှက်ရစေဖို့..၊ ဆိုတာတွေပဲရှိတယ်.. တိုင်းပြည်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး.. ပြည်သူအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး.. ဘာသာသာသနာအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူး.. နိုင်ငံတကာအလယ်မှာမျက်နှာပန်းလှစေဖို့လဲမဟုတ်ဘူး.. သူတို့ကို ကျွေးမွေးပေးကမ်း လူလားမြောက်စေခဲ့သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့တစ်ခုအတွက်ပဲဖြစ်တယ်..၊ ကာကွယ်ချင်စိတ်ကများနေတော့..... အောက်တန်းကျတဲ့နည်းပေါင်းစုံကို သုံးမိနေတယ်.. အောက်တန်းကျတဲ့နည်းတွေသုံးမိတော့ စိတ်ဓာတ်တွေပါ အောက်ဆုံးရောက်သွားတယ်..၊ နောက်ဆုံး ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့.. ရွာရိုးကိုးပေါက်လျှောက်သွားပြီး သန်းလိုက်ရှာ.. သန်းလိုက်ရှာ..လို့ သန်းတုတ်ရင်း..သူတပါးအတင်းလိုက်ပြောတဲ့... ရုပ်ရှင်ထဲက အဖွားကြီးတွေလို.... လယ်ဗယ်လောက် ပဲရှိတော့တာသေချာတယ်..။ (ကာတွန်း- စောငို)
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:48 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook